Lix cayaaryahan oo ka tegaya Barcelona bishaan Jannaayo ka dib qarashkii badnaa ee ku baxay saxiixa Philippe Coutinho » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/Lix cayaaryahan oo ka tegaya Barcelona bishaan Jannaayo ka dib qarashkii badnaa ee ku baxay saxiixa Philippe Coutinho
Lix cayaaryahan oo ka tegaya Barcelona bishaan Jannaayo ka dib qarashkii badnaa ee ku baxay saxiixa Philippe Coutinho
Barcelona ayaa u baahan inay isku miisaanto dhaqaalaheeda ka dib markii ay 145 milyan oo ginni ku qarash gareysay saxiixa kubadsameeyaha reer Brazil Philippe Coutinho.
Waxaa intaas sii dheer inay Barcelona xagaagii lasoo dhaafay 105 milyan oo ginni kula soo wareegtay Ousmane Dembele, sidaas darteed kooxdu waxay haatan u baahan tahay inay iska dirto cayaartoyda qaarkood si ay uga soo ceshato lacag, mushaarkoodana ay u badbaadsato.
Barcelona ayaa qaab cayaareed wanaagsan ku jirta xilli cayaareedkaan 2017 illaa 2018 iyadoo aan dhinaceeda dhulka la dhigin horyaalka La Liga iyo tartanka UEFA Champions League, balse waxaa jira lix cayaaryahan oo ay kooxdu iibin doonto si ay isugu miisaanto dhaqaalaheeda.
Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba iyo Paulinho ayaa ka mid ah xiddigaah ay haatan kooxdu sida weyn ugu tiirsan tahay. Majaladda Marca ee dalka Spain ayaana sheegeysa inay lixdaan cayaaryahan ka tegi doonaan kooxda ka dhisan Nou Camp Stadium bishaan Jannaayo.
Javier Mascherano ayaa liiskaan ugu horreeya iyadoo daafaca reer Argentina uu u baahan yahay kubad joogto ah si uu u cayaaro Koobka Adduunka. Shiinaha ayuuna kusii jeedaa oo mushaar badan looga sheegay.
Rafinha waa xiddiga labaad ee ka tegi doona Barcelona bishaan Jannaayo iyadoo tababare Ernesto Valverde uusan adeegsan laacibkaan dhaawacyadu hareeyeen, Celta Vigo ayaa raadineysa, sidoo kale horyaalka England Premier League ayaa laga doonayaa.
Arda Turan, Aleix Vidal, Gerard Deulofeu iyo Andre Gomes ayaa dhammeystiraya liiska lixda cayaaryahan ee ay soo bandhigtay majaladda Marca kuwaasoo bishaan ka tegaya Barcelona
“Weli waan la xanuunsanayaa ka tagi taankii Philippe Coutinho ee kooxda Liverpool”